China Truck Side Mirror PK94PK9482 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Ny fitaratry ny kamio PK9482 anay dia mety amin'ny VOLVO FH12 (Miaraka amin'ny defrost, 24 V). Manana traikefa amin'ny famokarana 10 taona izahay, haren'ny fahalalana ara-materialy, fizotra machining sy famokarana marobe, ny famokarana OEM no tanjakay.
Ny fitaratry ny kamio PK9482 anay dia mety amin'ny VOLVO FH12 (Miaraka amin'ny defrost, 24 V). Manana traikefa amin'ny famokarana 10 taona izahay, harem-pahalalana ara-materialy, fizotran'ny famolavolana sy famokarana marobe, famokarana OEM no tanjakay. Manana departemanta momba ny lefona izahay, manana fahaiza-manao famokarana sy fizarana matanjaka. Azontsika atao ny manome fahafaham-po ny fangatahanao ao anatin'ny 2-7 andro. Manao izay fara herinay foana izahay hamahana ireo olana, ary mametraka ny tombontsoan'ireo mpanjifantsika ho lohalaharana. Ary afaka mamatsy kojakoja ho an'ny marika marobe isika, toy ny SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG sns.
Teo aloha: Tratry ny fitaratry ny kamio PK9468
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9483